Enweghị m ike iwepụta mmadụ ole na-ehichapụ email na-enweghị agụ ya n'ihi na… ọ nweghị ihe ị ga-agụ ma ọ bụrụ na ibudata ihe oyiyi ahụ. Nke a bụ ezigbo nsogbu na HTML ozi ịntanetị… ma ọ dị nnọọ mfe izere.
Egosiputa ederede dika onyonyo… gosiputara dika ederede. O doro anya na ọ gaghị adị oke mma, mana ọ ga - agụta ya - nnukwu ọdịiche. Panera kwesiri imebi ihe onyonyo na ederede na email.